iPhone 7 ne7 plus: Maonero ekutanga paunenge uchizama | Ndinobva mac
iPhone 7 ne7 plus: Maonero ekutanga paunenge uchizama
Yakafananidzwa | | Noticias
Sezvaunogona kufungidzira, ichi chichava chidimbu chemafungiro, uye zvakare chaicho chaicho. Nhasi ndichataura nezve iyo iPhone 7 uye 7 kuwedzera, ivo vatsva kuApple Chitoro. Mazhinji ndiwo makomenti uye dhata idzo vashandisi vakapa nekukurumidza pavanongowana yavo terminal. Uye zvakare, vezvenhau uye mablog vakataura nezve ayo matsva uye akakosha maficha. Isu taonawo kumwe kusingabhokisi uye kuramba uye kuyedza kwekamera zvatotanga.
Zvakanaka, Chii chinoonekwa neavhareji mushandisi kana kuona kana uchiedza iyo iPhone 7 uye 7 kuwedzera? Ichi chave chiitiko changu pakuyedza uye mutsauko wandakaona pakati peiyi nyowani yekupedzisira uye yangu yazvino iPhone 6. Ini ndatokuudza kuti iyo mbiri kamera haisi iyo yandishamisa ini zvakanyanya.
1 Dhizaini uye kutaridzika kweye iPhone 7
2 iPhone 7, ndeapi mashoko ako akanakisa?
Dhizaini uye kutaridzika kweye iPhone 7
Chaizvoizvo zvakafanana imwezve nguva. Vakwanisa sei kuiisa tisina kutaura kuti yakafanana? Kuchinja iyo nzvimbo grey kune matte nhema iyo vamwe vashandisi vanofarira uye kuwedzera iyo yekutanga kara kutanga neiyo 128Gb mamodheru. Glossy nhema yakwezva yakawanda yekutarisisa uye pamwe ndiyo inonyanya kudiwa, asi kupera uku hakuna chinhu chitsva kana shanduko.
Iri kukanda chiutsi cheutsi kune icho chimiro chakachengetedza. Izvi zvinokanganisa maonero angu echigadzirwa uye nemaonero angu ekutanga? Hongu, uye zvakawanda. Zvinondipa kunzwa kuti ndizvo zvimwe chete nezvandakatakura muhomwe mangu. Iyo iPhone 6 ine 3D Kubata, simba rakawanda, kamera iri nani uye nhevedzano yezvinhu zvitsva. Asi terminal yangu iri kundiitira zvakanaka, ndinofanira kutenga iyo iPhone 7 nekuti iri nani? Kwete, nekuti ini handicherechedze mutsauko uye zvinondipa kunzwa kwekunge ndiri kutambisa mari. Mari yandisingafaniri kurega. Dhizaini imwechete yakafanana nekuvandudzwa.
Apple ine musika wakakura wekuvhara. Kwete chete vashandisi vevashandisi vane ma6 kana 6s vanosarudza kumutsidzira, asi huwandu hwakazara hunotakura iPhone 4, 4s, 5 kana 5s. Kune vese zvichareva shanduko chaiyo uye ivo vanozoona mutsauko. Pakupera kwezuva iri yakanaka kwazvo uye inoshamisa chinouraya, asi kuva ne6 kana 6s hausi kuona chero chinhu chitsva.
iPhone 7, ndeapi mashoko ako akanakisa?
Ehezve, Apple inovimbisa bhatiri rakawanda, simba uye zvese izvo. Asi mune imwe nguva tichiyedza muchitoro hatizoone mutsauko. Izvo zvakanaka asi hazvishamise. Zvinonzwisisika mumakore maviri ivo vakwanisa kunatsiridza bhatiri zvakanyanya. Chinhu chakashamisa chingave kana vasina. Chii chakandishamisa ipapo? Iyo kamera, ine imwechete kana maviri lenzi. Yakanaka kwazvo uye zoom zvakare. Zvekumashure nekumberi zvave nani, asi ndinoziva kuti vacharamba vachivandudza iyo mune ramangwana, uye kwandiri haisiyo inonyanya kukosha pakutenga.
Isu takaudzwa kuti bhatani repamba rakanga rakagadzirwazve. Kwete, havana kuigadzirisazve, vakatoibvisa. Kutaridzika kwakafanana, asi kubata kwacho ndeyechinyakare skrini ine 3D Kubata. Chinhu chinotevera chatinozoona ndechekuchiisa pachiratidziro uye nekumira kuve nenzvimbo yaro mune terminal. Zvakawanda zvakanyanya kugadzikana uye zvinonakidza bhatani idzva reKumba, ini zvakare ndinokuudza. Yakasarudzika padanho rekumanikidza.
Pane chine chimwe? Inzwi. Ini ndaida kuyedza mutauri we stereo uyo unobuda zvese kubva pasi uye kubva kumusoro kwepamberi nzvimbo. Ndakaisa iyo iPhone 7 yekutamba nenziyo Perfect Illusion naLady Gaga uye padhuze neangu iPhone 6. Zvese zviri zvizere vhoriyamu. Mhedzisiro yacho ndiyo yakandifadza zvakanyanya nezve ino terminal. Kupfuura kaviri kurira kweiyo iPhone 6 uye yepamusoro mhando. Zvinoshamisa. Chaizvo mutauri anotakurika.
Mukupedzisa. Zvandakatotaura mune zvimwe zvinyorwa. Kana iwe uine iPhone 6, iyo isisatengeswe muzvitoro, kana 6s haina kukodzera kusvetukira kuchizvarwa chino. Kana iwe uchida kuona shanduko yakanaka, uchafanirwa kumirira. Chinhu chakanaka ndechekuti yako terminal ichiripo chaizvo uye dhizaini haisi kumashure kumashure.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » iPhone 7 ne7 plus: Maonero ekutanga paunenge uchizama
RAW inoenderana inoenderana yemadhijitari kamera
Pfungwa iPhone 7 inokurumidza kupfuura chero MacBook Air